Madaxweynaha UEFA oo xiddig aan ahayn Messi iyo Ronaldo u doortay laacibka ugu fiican Adduunka – Gool FM
Haaruun December 4, 2021
BIRMINGHAM, ENGLAND - DECEMBER 01: Fernandinho of Manchester City congratulates teammate Bernardo Silva after scoring their side's second goal during the Premier League match between Aston Villa and Manchester City at Villa Park on December 01, 2021 in Birmingham, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
(Yurub) 04 Dis 2021. Madaxweynaha UEFA ee Aleksander Čeferin ayaa qof walba ka yaabiyay kaddib markii uu doortay xiddiga ugu fiican adduunka waqtigan, isaga oo tilmaamay in Weeraryahanka Kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé uu yahay kan ugu fiican Dunida.
Čeferin ayaa aaminsan in tayada iyo hibada Kylian Mbappé uu ku soo bandhigayo Kooxda Paris Saint-Germain iyo xulka qaranka France ay ka dhigayso ciyaaryahanka ugu fiican waqtigan, waxaana uu la mid dhigay Michel Platini iyo Zinedine Zidane xilligoodii.
Miyuu Čeferin si ula kac ah isaga indhatiray Messi iyo Ronaldo?
Aleksander Čeferin ayaa gabi ahaanba iska indho-tiray Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo sanadihii ugu dambeeyey xukumayey dunida kubadda cagta, laakiin dadka qaar ayaa u fasirtay hadalladiisa mid aan ula jeedin inuu hoos u dhigo labadaan xiddig, balse taa beddelkeeda uu xaqiijiyay in Kylian Mbappe uu yahay xiddiga la wareegi doona hoggaanka kubadda cagta sanadaha soo socda.
“Aragtidayda, Michel Platini waagiisii wuxuu ahaa ciyaaryahanka ugu fiican, ama mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican Adduunka,” ayuu yiri Aleksander Čeferin oo u warramayey Wargeyska Isbaanishka ee AS.
Čeferin ayaa hadalkiisa intaa ku daray: “Kaddib Zinedine Zidane wuxuu ahaa ciyaaryahanka ugu fiican jiilkiisa, fikradayda Kylian Mbappé wuxuu noqon karaa ciyaaryahanka ugu fiican Adduunka wakhtigan.”